Cadaadiska Maxamed dheere ee ku wajahan xildhibaanada ku sugan magaalada Jowhar
Buluugleey July 8, 2005
Guddoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka Sh/dhexe Max’ed Cumar Xabeeb (Maxamed-dheere) ayaa Jowhar ka soo saaray wareegto uu ku xaddidayo xorriyada u kala socodka gobolka. Wareegtadan oo ku dalbanayo in aanan magaalda xilligii la doono laga bixi karin isga oo Maxamed Dheere aan amar buuxa laga helin. Wareegtada waxaa ku xusan in cidii dooneysa in ay ka baxdo gobolka marka hore waa inay soo war gelisaa Maamulka Sh/dhexe, taas oo cadaadis aad ah ku noqotay xubnaha labada gole ee ku sugan magaalada Jowhar.
Wareegtada waxaa loogu gogolxaarayo in lagu sugo amaanka Col. Cabdullahi Yusuf oo la filayo inuu dhawaan soo gaaro magaalada Jowhar. Cabsi weyn ayaa soo wajahday maamulka Maxamed Dheere intii uu ku martigeliyay xubnaha ka socda dowlada KMG, iyo ciidamada ka socda gobolka waqooyi bari iyo warar kale aan sugneyn waxay sheegaya in ciidamo Itoobiyaan ah ay ku sugan yihiin Gobolka Shebeelada Dhexe. Taas oo dhamaan dadka Soomaaliyeed dareen weyn gelisay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa kacsan jawiga deganaashaha Sh/Dhexe waxayna wararku sheegayan in haddii ciidamo uu wato Col. C/laahi Yuusuf ay soo gaaraan gudaha gobolka waxaa suurtagal ah in dagaal foodda lays daro.
Warar kale aya sheegaya in dowlada KMG ay si toos u soo faragelisay Maamulka Sh/dhexe oo waxay dowladdu soo jeedisay in tartan loo galo Gudoomiyenimada gobolka Sh/dhexe taas oo laga yaabo in looga guuleysto Maxamed Dheere oo siyaasada maamulka gobolka in mudaba siduu doono ka yeelo.